आयुर्वेदिक औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गरिने – Deurali News
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) को उपचारका लागि आयुर्वेदिक गुणयुक्त जडीबुटीको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । उक्त अध्ययन आयुर्वेदिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा रिसर्च कन्सल्टेन्ट डा. विशुनदयालप्रसाद पटेलको नेतृत्वमा हुनेछ ।
जेठीमधु र त्रिकटु नै रोज्नुको कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘यी औषधिहरू चीनमा पनि परम्परागत औषधिका रूपमा प्रयोग भइसकेका छन् । सार्स रोगको उपचारमा प्रयोग गर्दा यी औषधिमा पाइने रासायनिक तत्त्व ‘ग्लिसिराइजिन’ ले भाइरसलाई मार्न सफल भएको भन्ने अध्ययन पनि छ । यो भाइरस पनि त्यही परिवारअन्तर्गतको हो ।’ डा. पटेलका अनुसार यो औषधि नयाँ भने होइन । ‘सदियौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको औषधि हो । घाँटी खसखस हुने र रुघाखोकी लाग्ने समस्या यसले निको पार्छ । त्रिकटुले जीउ दुखेमा निको पार्नुका साथै भोक पनि जगाउँछ,’ उनले भने ।
आयुर्वेदिक चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवालीका अनुसार आयुर्वेदिक औषधिले कोभिड–१९ निको पार्छ भनेर ग्यारेन्टी गरिएको छैन । तर, रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता भने बढाउँछ ।
लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयका प्रमुख डा. नलीनाथ तिवारीले पनि बुटवलस्थित एन्फा आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका संक्रमित आयुर्वेदिक औषधिले निको भइरहेको दाबी गरे । आइसोलेसनमा लक्षण नभएका बिरामीहरू छन् । ‘उनीहरूलाई बिहान योग गराउने, गुडुची, च्यवनप्रास नियमित खुवाउने गरिएको छ । भर्ना भएका कसैमा पनि गम्भीर अवस्था देखिएको छैन । सबैलाई लाभ नै भएको छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले कोभिड–१९ का लागि बनाएको निर्देशिकामा शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि जडीबुटीहरूको नियमित सेवन गर्न भनिएको छ । गुर्जो, असुराको पात, बेसार, सुठो, मरीच, पिप्ला, तुलसीको पात, तेजपात, दालचिनी सेवन गर्ने र दैनिक योग गर्न पनि सुझाइएको छ ।
धेरै जनामा अहिले आयुर्वेदिक औषधिप्रतिको विश्वास बढेको पाइन्छ । कोभिड–१९ निको भएर घर फर्किएकाले पनि आइसोलेसनको बसाइमा घरमै पाइने जडीबुटी सेवन गरेर लाभ लिएको दाबी गर्ने गरेका छन् । बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ सम्बन्धी आयुर्वेदिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको विशेष छलफलमा आयुर्वेदको प्रयोग बढाउन जोड दिएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
नेपाली सेनालाई भात खुवाएर राख्ने हैन !
June 14, 2020 Deurali News 0
रातो मछिन्द्रनाथ रथयात्रा आजबाट, यस्तो छ रथयात्राको तयारी